Ogaden News Agency (ONA) – Xabad-Joojin Lafilayo Inay Ka Dhaqan Gasho Wadanka Suuriya.
Xabad-Joojin Lafilayo Inay Ka Dhaqan Gasho Wadanka Suuriya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegaya inuu aaminsan yahay in heshiis hordhac ah laga gaadhay xal u raadinta colaadda dalka Suuriya. John Kerry ayaa hadalkaasi ku sheegay warqoraal ah oo uu kasoo saaray xili uu ku sugnaa wadanka Urdun, waxyar kaddib markuu la hadlay dhigiisa Ruushka, Sergei Lavrov.
Mr. Kerry wuxuu tilmaamay in madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ay maalmaha soo socda wada hadli doonaan si loo dhamaystiro wax uu ku sharaxay mabaadii’da heshiiska lafilayo in dalka Suuriya laga gaadho. Dowladaha ugu xooga badan caalamka iyo Bariga Bhexe, waxay isku raceen horraantii bishan in lajoojiyo dagaalka Suuriya.
Wadamadii ku shiray magaalada Munich ee dalka Germany waxay go’aamiyeen in arrintaasi ay hirgasho Jimcihii aan soo dhaafnay balse xabad joojinta ma aysan dhaqan galin. Hase yeeshee John Kerry waxa uu filayaa in xabad joojinta ay si deg deg ah ku dhaqan gasho.
Dhan ka kale, Kooxaha u ololeeya arrimaha Suuriya waxay sheegayaan in ugu yaraan 46 qof lagu dilay laba qarax oo ka dhacay magaalada galbeedka ku taalla ee Xumsi ee dalka Suuriya. Kooxda indha indhaysa arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee fadhigoodu yahay wadanka Ingiriiska waxay tilmaamtay in intabadan dadka qaraxyadaasi ku dhintay ay rayid yihiin.
Labada qarax waxay ka dhasheen gawaadhi ladhigay xaafadda aad looga taageero maamulka Bashar Al-Asad. Illaa iyo hadda macadda kooxda ka dambaysay qaraxyadaasi, laakiin deegaankaasi waxaa horay weerar noocaan ah ugu qaaday kooxda Daacish.